လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ၂၄-ဦး မလေးရှားတွင် ရေနစ်သေဆုံးမည်ကို စိုးရိမ်ရ - Top MM News
ထိုင်းနယ်စပ်အနီး မလေးရှားရေပြင်တွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရနေဟန်တူသည့် အထောက်အထားမဲ့နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းသူ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) အနည်းဆုံး ၂၄-ဦးတို့သည် ၄င်းတို့ လိုက်ပါလာသည့် လှေပေါ်မှ ခုန်ချရေကူးလာခဲ့ကြရာ ၁-ဦးသာလျှင် ကမ်းခြေသို့ ဘေးကင်းစွာရောက်ရှိလာကြောင်း မလေးရှားမြောက်ပိုင်းရေပြင် ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ မိုဟာမက်ဇာဝါ၀ီအဗ္ဗဒူလာက ပြောဆိုသည်ဟု Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
အပန်းဖြေစခန်းရှိရာ လန်ကာဝီကျွန်းသို့ ရေကူးရောက်ရှိလာသူ အသက် ၂၇-နှစ်အရွယ် နူးဟိုစိန်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းထားသည်ဆို၏။ မလေးရှားကမ်းခြေစောင့်တပ်က ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း သေဆုံးရုပ်အလောင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှင်သူ မတွေ့ရှိရကြောင်းနှင့် ဒုက္ခသည်ဘုတ်ပေါ်တွင် မည်သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုလည်း ရှင်းလင်းစွာ မသိရှိရကြောင်း AP က ဖော်ပြသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအများစု မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုများမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသည့် ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီတို့မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလားအလာများကို ရှာဖွေလျှက်ရှိသည်။ မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ပြီး ဦးတည်ချင်စဖွယ် နေရာကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည့် မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကာကွယ်ရန် နယ်စပ်ဒေသထိန်းချုပ်မှုများ တင်းကြပ်ထားရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၃-နှစ်က စစ်ဖက်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ထွက်ပြေးလာကြရသည့် ဘင်္ဂါလီအများစု ဒုက္ခသည် ၇၀၀,၀၀၀ ခန့်မှာ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ခ်ဘဇားခရိုင်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် စုပြုံပြွတ်သိပ်နေထိုင်ကြရသည်။ မလေးရှားနှင့်အိမ်နီးချင်းအင်ဒိုနီးရှားသို့ ဦးတည်သည့် လှေများဖြင့် လူဦးရေထူထပ်သောဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ထွက်ခွာရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
ရေနစ်ဒုက္ခသည်များရှိနိုင်သည့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရေပြင်ကို ရှာဖွေရန် မလေးရှားကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့က လေယာဉ် ၂-စင်းနှင့် ရေယာဉ် ၂-စင်းကို ဖြန့်ချထားကြောင်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားချိန် မှစတင်၍ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီများ ၀င်ရောက်လာမှုကို တားဆီးရန် မလေးရှားတွင် ရေကြောင်းကင်းလှည့်မှုကို တိုးမြှင့်ထားခဲ့သည်။
လှေအချို့မှာ မလေးရှားကမ်းခြေသို့ ရောက်ရှိသွားပြီးမှ ( မောင်းထုတ်ခံရ၍ ) ပြန်လှည့်လာရသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များအား ဒေါသဖြစ်စေသည်။
#လှေစီးပြေးဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ #မလေးရှားတွင်_ရေနစ်သေဆုံးမည်ကို_စိုးရိမ်ရထိုင်းနယ်စပ်အနီး မလေးရှားရေပြင်တွင် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရနေဟန်တူသည့် အထောက်အထားမဲ့နေရပ်ရွှေ့ပြောင်းသူ ဒုက္ခသည်ဘင်္ဂါလီ ( မူရင်း ရိုဟင်ဂျာဟုဖော်ပြ ) အနည်းဆုံး ၂၄-ဦးတို့သည် ၄င်းတို့ လိုက်ပါလာသည့် လှေပေါ်မှ ခုန်ချရေကူးလာခဲ့ကြရာ ၁-ဦးသာလျှင် ကမ်းခြေသို့ ဘေးကင်းစွာရောက်ရှိလာကြောင်း မလေးရှားမြောက်ပိုင်းရေပြင် ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ မိုဟာမက်ဇာဝါ၀ီအဗ္ဗဒူလာက ပြောဆိုသည်ဟု Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။
ရဲစခန်းရှေ့တွင် ၁၁ လခန့် ရပ်ထားသည့် ဝိုင်ဘီအက်ယာဉ် မီးထလောင်
သတင်းကောင်းပါဗျို့… COVID-19 . ကာကွယ်ဆေး . လူတွင် စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီ . 💉💉
အသက် (၇၅) ကျော်ပေမယ့် ယနေ့တိုင် ပဲပြုတ်အရောင်းမပျက်သေးတဲ့ အဖိုးအဖွားစုံတွဲ